ब्वाइफ्रेण्डलाई काबुमा राख्न गर्लफ्रेण्डले बनाइन् कडा नियमको सूची, सर्वत्र आलोचना | Rajmarga
ब्वाइफ्रेण्डलाई काबुमा राख्न गर्लफ्रेण्डले बनाइन् कडा नियमको सूची, सर्वत्र आलोचना
सबै जोडीहरु एक अर्काभन्दा फरक हुन्छन् । सम्बन्धमा रहँदा उनीहरु उक अर्कालाई कतिसम्म स्वतन्त्रता दिन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको सोचमा निर्भर गर्छ । हालै एक यस्ती गर्लफ्रेण्डको चर्चा छ जो ब्वाइफ्रेण्डलाई अलिकति पनि स्वतन्त्रता दिन चाहन्नन् । यसको प्रमाण २२ नियमको त्यो सूची हो जो ब्वाइफ्रेण्डलाई काबुमा राख् ती युवतीले बनाएकी छिन् । यो नियमको लिस्टमा प्रस्ट लेखिएको छ कि अन्य युवतीको हकमा उनी के गर्न पाउँछन् र के गर्न पाउँदैनन् ।
२२ नियमको यो लिस्ट एक ट्वीटर युजरले फेला पारेपछि उनले अनलाइनमा पोस्ट गरिदिएका हुन् । ती युजरले यो लिस्टको फोटो शेयर गर्दै लेखेका छन् ‘केही बिचरा केटाहरु कारमा कहीँ जाँदै थिए । उनीहरु कारबाट झर्दा यो लिस्ट खस्यो र मैले भेटें । शायद यो उनीहरुमध्ये कसैकी गर्लफ्रेण्डले उनलाई दिएकी थिइन् ।’ ती युजरले नियमको जुन लिस्ट शेयर गरेका छन् त्यसमा केही नियम त निकै विचित्र र कडा छन् । जस्तै युवकले जबसम्म गर्लफ्रेण्ड साथमा हुँदिनन् तबसम्म पिउन पाउँदैनन् । गर्लफ्रेण्डलाई जतिबेला मन लाग्छ ब्वाइफ्रेण्डको फोन चेक गर्न सक्नेछिन् ।
यो नियम पढेपछि ट्वीटरमा मानिसहरु जिल्ल पर्दै ती युवतीलाई संसारकै सबैभन्दा खतरनाक गर्लफ्रेण्ड भनेका छन् । नियम यतिसम्म विचित्र छन् कि मानिसहरु अनेक किसिमका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नियममा लेखिएको छ ‘कुनै पनि सिंगल केटीको नम्बर राख्न पाउने छैनौ । सामाजिक संजालमा कुनै केटीलाई फलो गर्न पाउने छैनौ । मलाई छोडेर कारमा एक्लै कतै जान पाउने छैनौ ।
कुनै सिंगल केटीतिर हेर्न पनि पाउने छैनौ । कुनै केटी आएर कुरा गरे त्यहाँबाट अन्तै जानेछौ । हप्तामा २ पटकभन्दा बढी साथीसँग घुम्न जान पाउने छैनौ । हामी सँगै बस्यौं भने तिम्रा साथीहरु हाम्रो घरमा आउन पाउने छैनन् । यदि मैले हाम्फाल्न भनें भने तिमी सोध्नेछौ – कति उचाइबाट राजकुमारी ? मेरो म्यासेजको जवाफ दिन १० मिनेटभन्दा बढी समय लगाउन पाउने छैनौ ।’एजेन्सी
Previous post: काठमाडौँ–लुम्बिनी पर्यटकीय बस सञ्चालन
Next post: ती महिला जो वेश्यावृत्तिमा लाग्न पाउनु पर्ने भन्दै लडिन्
वाफ रे वाफ ! यसरी बसिन महिला, तस्वीर भाइरल हुने नै भयो
पूरानो घर भत्काउँदा भेट्यिो १६७ वर्ष पूरानो बाकस, सम्पतीको लोभमा फुटाउँदा होस् उड्यो
जापानी पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता नै नपर्ने, यस्तो छ रोचक कारण
पर्समा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी पांच चिज, तपाइ कंगाल बन्नुहुन्छ
केटाकेटीले क्याफेमा ‘फ्रि वाईफाईबाट’ पोर्न हेर्न थालेपछी,गाउँले गर्यो अनौठो निर्णय